DirectX ကို | October 2019
DirectX ကို - မာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာ (ဂိမ်းများ, ဗီဒီယို, အသံဖိုင်) နှင့်ဂရပ်ဖစ်အလုပ်အစီအစဉ်များပြန်ဖွင့်ဘို့အတာဝန်ရှိသည်သောစနစ်၏ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများအကြားထိရောက်သောအပြန်အလှန်သေချာစေရန်အထူးစာကြည့်တိုက်။ ကံမကောင်းစွာပဲ (သို့မဟုတ်ကံကောင်းထောက်မစွာ) DirectX ကိုဖယ်ရှားခြင်း, ခေတ်မီတဲ့ operating systems ထဲမှာ DirectX ကိုစာကြည့်တိုက်ကို default အားဖြင့် installed နှင့်ပရိုဂရမ် shell ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနေကြသည်။
ခေတ်သစ်ဂိမ်းအတွက်ဆေးတစ်လက်« Device ကိုဖယ်ရှားပြီး Get အကြောင်းရင်း»
ဂိမ်းထဲမှာမအောင်မြင်မှုများနှင့် "ပျက်ကျ" ၏အဖြေအမျိုးမျိုး - တစ်မျှမျှတတဘုံဖြစ်ရပ်ဆန်း။ ဒီပြဿနာတွေကိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်အများအပြားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ထိုကဲ့သို့သော Battlefield 4, နှင့်အခြားသူများအဖြစ်ယနေ့အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများစီမံကိန်းများအတွက်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပြဿနာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ထိုကဲ့သို့သောဂရပ်ဖစ်ကဒ်အဖြစ်အလွန်ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အတူတင်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းဂိမ်းများ, running တဲ့အခါမှာ DirectX ကို function ကို "GetDeviceRemovedReason" ဒီပျက်ကွက်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
DirectX ကို 11 နှင့်အတူဂိမ်း၏ပစ်လွှတ်နှင့်အတူပြဿနာများကိုဖြေရှင်း
အတော်များများသင် DirectX ကို 11. ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများအတွက်စီမံကိန်းအစိတ်အပိုင်းများပံ့ပိုးမှုစတင်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ကြောင်းစနစ်ကနေအကြောင်းကြားစာကိုလက်ခံရရှိ start တချို့ဂိမ်းအတွက်အသုံးပြုသူများအဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ကွဲပြားနိုင်ပေမယ့်အဓိပ္ပာယ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်: ဗီဒီယိုကဒ် API ကို၏ဤဗားရှင်းကိုထောက်ပံ့မပေးပါဘူး။ ဂိမ်းစီမံကိန်းများနှင့် DirectX ကို 11 DX11 အစိတ်အပိုင်းများကိုပထမဦးဆုံး 2009 ခုနှစ်ကိုပြန်မိတ်ဆက်နဲ့ Windows7၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မှားယွင်းနေသည်ဆုံးမခြင်းအားကစားပြိုင်ပွဲ« DirectX ကို Setup ကိုမှားယွင်းနေသည်တစ်အတွင်းပိုင်းအမှားဖြစ်ပွားခဲ့သည်»
အားလုံးဂိမ်းကို Windows operating systems ထဲမှာ run ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြတယ်, DirectX ကိုအစိတ်အပိုင်းများအချို့မူကွဲများရရှိနိုင်မှုသူတို့ရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက်လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားအစိတ်အပိုင်းများပြီးသားဟာ operating system ထဲမှာ Pre-installed ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံ installer ကိုဂိမ်းစီမံကိန်းတွင် "ချုပ်" နိုင်ပါသည်။ မကြာခဏထိုကဲ့သို့သောဖြန့်ဝေ၏ installation စနစ်တကျနေရာအရပ် ယူ. , ဂိမ်း၏ installation ဆက်လက်နိုင်ပါတယ်မကြာခဏမဖြစ်နိုင်ဘူး။
Windows ကို DirectX ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုအပြေးတစ်ဦးကွန်ပျူတာပေါ်မှာအချို့ဂိမ်း running အမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါသတိပြုပါ။ ဒီအကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါး၌ဆွေးနွေးရန်ရသောအကြောင်းရင်းများ, တစ်အရေအတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဘို့ရွေးချယ်စရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ခေတ်သစ်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့် operating system များပေါ်တွင်အဟောင်းကိုဂိမ်းကို run ဖို့ကြိုးစားနေသည်အသုံးပြုသူများအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်ဂိမ်းများကိုအများဆုံးမကြာခဏချွတ်ယွင်း DX အစိတ်အပိုင်းများအတွက် DirectX ကိုအမှားအယွင်းများ။
Microsoft က Windows အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနီးပါးအပေါငျးတို့သဂိမ်းများ, DirectX ကို အသုံးပြု. တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားစာကြည့်တိုက်ကိုအကောင်းဆုံးဂရပ်ဖစ်ကတ်များအကျိုးဆက်အဖြစ်, အရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူရှုပ်ထွေးဂရပ်ဖစ်ဆပ်, အရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုပါ။ ဂရပ်ဖစ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုးမြှင့်အခွင့်အလမ်းများမြင့်တက်မှုနှင့်အတူ။
ဗီဒီယိုကဒ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ကဲ့သို့သောတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိသည် "DirectX ကို၏ပံ့ပိုးမှု။ " ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ DX လိုကသည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုကြပါစို့။ ကိုလည်းကြည့်ပါ: DirectX ကို DirectX ကိုဘာလဲကိုဗီဒီယိုကဒ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ဖို့ကိုဘယ်လို - အစီအစဉ်များကိုခွင့်ပြုရေးကိရိယာများ (စာကြည့်တိုက်) အစုတခု, အဓိကအားဖြင့်ကွန်ပျူတာဂိမ်းဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏ဟာ့ဒ်ဝဲစွမ်းရည်တိုက်ရိုက် access ကိုရှိသည်။
DirectX ကိုစာကြည့်တိုက်ကို update လုပ်နည်း
DirectX ကို - ဂိမ်းဗီဒီယိုနှင့်အသံနှင့်တိုက်ရိုက် "communicate" ကိုခွင့်ပြုစာကြည့်တိုက်များအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဤအစိတျအပိုငျးအသုံးပြုဂိမ်းစီမံကိန်းများကိုအများဆုံးထိထိရောက်ရောက်ကွန်ပျူတာဟာ့ဒ်ဝဲစွမ်းရည်ကိုအသုံးနေကြသည်။ ကိုယ်ပိုင် DirectX ကို update ကိုအလိုအလျောက်တပ်ဆင်အမှားအယွင်းများပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖိုင်တွေပေါ်, ဂိမ်း "ကျိန်ဆို" ဖြစ်ပေါ်သို့မဟုတ်သင်ပိုသစ်သောဗားရှင်းသုံးဖို့လိုရှိရာကိစ္စများတွင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
Run ဂိမ်းထဲမှာအမှားများကိုအဓိကအားကြောင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ (ဂရပ်ဖစ်ကဒ်) ကလိုအပ်သည့်ထောက်ခံမှုမရှိခြင်းမှအစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်တည်းဖြတ်မူများကိုကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်း၏သဟဇာတမမှပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ သူတို့ထဲမှတစ်ဦး - "DirectX ကို device ကိုဖန်ဆင်းခြင်းအမှား" နှင့်ကဤဆောငျးပါးတှငျဆှေးနှေးမညျအကြောင်းကိုကြောင့်ပါပဲ။ အဓိကအားဖြင့်ဂိမ်းကမ္ဘာ၏တင်ကာလအတွင်းက The Run ကို: မှားယွင်းနေသည်« DirectX ကို device ကိုဖန်ဆင်းခြင်းအမှား»အားကစားပြိုင်ပွဲဒီပြဿနာထိုကဲ့သို့သော Battlefield3အဖြစ် Electronic Arts တို့ထံမှဂိမ်းထဲမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးမြန်နှုန်းများအတွက်လိုအပ်။
အဘယ်အရာကို DirectX ကို Windows7ကိုအသုံးပြုသည်
DirectX ကို - Windows operating system များပေါ်တွင် run ဖို့ဂိမ်းများနှင့်ဂရပ်ဖစ်အစီအစဉ်များကို enable ပြုလုပ်တိကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းများကို။ စစ်ဆင်ရေး၏နိယာမဟာ DX software ကိုဂရပ်ဖစ် subsystem သို့ (ဗီဒီယိုကဒ်) ကို ပို. တိတိကျကျကွန်ပျူတာ၏ Hardware ကိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးနှင့်အပေါ်အခြေခံသည်။ ဒါဟာသင်ပုံရိပ်တွေ rendering များအတွက်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏အပြည့်အဝအလားအလာသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါစနစ်အ DirectX ကို Diagnostic Tool ကိုတစ်ဦးက Windows utility ကိုဖြစ်ပါတယ်
Diagnostic Tool ကို DirectX ကို - ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ယာဉ်မောင်း - သေးငယ်တဲ့စနစ်ကမာလ်တီမီဒီယာအစိတ်အပိုင်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့် Windows ကို utility ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီဥပမာအစီအစဉ် software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ၏လိုက်ဖက်တဲ့, အမျိုးမျိုးသောအမှားများနှင့်ပြဿနာများကိုသေချာစေရန်စနစ်စမ်းသပ်။ ကျနော်တို့ကအစီအစဉ်၏ tabs များ၏အကျဉ်းခရီးစဉ်ယူနှင့်ကကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လိမ့်မယ်အောက်တွင် Diagnostic Tools များ DX ၏အကျဉ်းချုပ်။
Windows ပေါ်မှာ DirectX ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုချိန်ညှိခြင်း
ကြှနျုပျတို့အားလုံး, ကွန်ပျူတာသုံးပြီးပါကထဲက "ညှစ်" ကိုအများဆုံးမြန်နှုန်းချင်တယ်။ acceleration စသည်တို့ကို CPU နဲ့ GPU ကို, မှတ်ဉာဏ်ဖြင့်ပြု အတော်များများကအသုံးပြုသူများကဒီမလုံလောကျဘူးလို့ခံစားရ, သူတို့ဆော့ဗ်ဝဲ settings ကို အသုံးပြု. ဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်လာဖို့နည်းလမ်းတွေရှာကြသည်။
Internal စနစ်ကအမှား DirectX ကို install လုပ်သည့်အခါ
အတော်များများကအသုံးပြုသူများက DirectX ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုအထုပ်ကိုတပ်ဆင်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နေကြသည်ကို install သို့မဟုတ် update လုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ မကြာခဏ, ဒီပြဿနာက DX ကို အသုံးပြု. ဂိမ်းနှင့်အခြားအစီအစဉ်များအဖြစ်ချက်ချင်းဖယ်ရှားလိုအပ်ပါတယ်, ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်မလုပ်ဖို့ငြင်းဆန်။ DirectX ကို install လုပ်သည့်အခါအမှားအယွင်းများ၏အကြောင်းရင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများစဉ်းစားပါ။
ကျနော်တို့က Windows7အတွက် DirectX ကိုဗားရှင်းသင်ယူ
DirectX ကို - အများဆုံးကိစ္စများတွင်, ဂိမ်းများနှင့်အခြားသောမာလ်တီမီဒီယာအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုသည်အရာ, Windows အတွက် programming ကို tools တွေကိုအစုတခု။ DirectX ကိုစာကြည့်တိုက်သုံးကြောင်းအလုပ် applications များဖြည့်စွက်ရန်, သငျသညျ operating system ကိုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ရှိရမည်။ သငျသညျကို Windows စေလွှတ်သောအခါအခြေခံအားဖြင့်အထက်ပါအထုပ်အလိုအလျှောက် install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
မှားယွင်းနေသည်နှင့်၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်« DirectX ကိုစတငျရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ»
DirectX ကို၏ "အမှား" ထားတဲ့အတွက်ဂိမ်းအတွက်အမှားအယွင်းများ, အတော်လေးဘုံဖြစ်ကြသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ဂိမ်းတစ်ခု operating system ကိုသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကဒ်ကိုထောကျပံ့မဟုတျကွောငျးအခြို့သောတည်းဖြတ်မူအစိတ်အပိုင်းလိုအပ်သည်။ အဲဒီချို့ယွင်းချက်တဦးနှင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။ တွင် ဒီအမှားက DirectX ကို၏လိုအပ်သောဗားရှင်းစတငျဖို့ဖြစ်နိုင်မဟုတျကွောငျးကိုဖျောပွ DirectX ကိုစတငျရန်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။
ဗီဒီယိုကဒ် DirectX ကို 11 ကို support ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်
ဒီနေ့ရဲ့ဂိမ်းများနှင့်အစီအစဉ်များ၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်ကို, 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်, စနစ်တပ်ဆင် DirectX ကိုစာကြည့်တိုက်၏လက်ရှိဗားရှင်း၏တည်ရှိမှုအဓိပ္ပာယ်ရှိ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အချိန်ပြည့်အလုပ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဒေတာတည်းဖြတ်မူများကိုများအတွက်ဟာ့ဒ်ဝဲထောက်ခံမှုမပါဘဲမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် DirectX ကို 11 ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အထောက်အကူသို့မဟုတ်အသစ်များရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ဘယ်လိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။